မိုးသည်းထန်ပြီး လေပြင်းတိုက်မှုကြောင့် ရန်ကုန်မြို့ ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်ရှိေ?? - Yangon Media Group
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း ဇွန် ၂၅ ရက်က မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်ရှိ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင်လဲကျခဲ့ပြီး ယာဉ်နှင့်လူများ ထိခိုက်မှုမရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ယင်းသို့ မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းပြီး လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် စမ်းချောင်းမြို့နယ် စိတ္တသုခလမ်း၊ ဘာဝနာလမ်းတို့ရှိ သစ်ပင်အချို့ လည်း လမ်းပေါ်လဲကျခဲ့ပြီး ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်အနီးရှိ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင်လည်း လဲကျခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း စမ်းချောင်းမြို့နယ်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ပြောသည်။
”ခုလောလောဆယ်တော့ ဆိုင်းဘုတ်တိုင်ကိုစည်ပင်ရယ်၊ စမ်း ချောင်းမီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အ ခြားတာဝန်ရှိအဖွဲ့တွေ ပူးပေါင်းပြီး တိုင်ကိုဖြတ်ထုတ်ပြီး လမ်းဘေးမှာပဲ ထောင်ထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ သစ်ပင်တွေကတော့ ရှင်း လင်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ်”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ ဟံသာဝတီလမ်းနှင့် ပြည်လမ်းထောင့်အနီးလဲကျခဲ့သည့် ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင်သည် ရန်ကုန်စည်ပင်မှ တစ်နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းဖြင့် မဲနှိုက်အငှားချထားသော အေအဆင့်ရှိ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင်ဖြစ်ပြီး ယာဉ်ကြောကျပ်တည်း မှုမဖြစ်စေရန်လဲကျနေသည့်တိုင် ဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြောင်း ရန်ကုန်စည် ပင်၊ စီမံရေးရာဌာနမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ပြောသည်။
”အဲဒီ ကြော်ငြာဆိုင်းဘုတ်တိုင်က တစ်နှစ်စာချုပ်သက်တမ်းနဲ့ မဲနှိုက်အငှားချထားပြီးသားတိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ စာချုပ်မှာ ငှားရမ်းတဲ့စာချုပ်သက်တမ်းပြည့်လို့ ပြန် အပ်ရင်ငှားထားတဲ့အတိုင်း ပြန် အပ်ရမယ်လို့ စာချုပ်မှာပါဝင်လို့ ငှားရမ်းခွင့်ရထားသူကပဲ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတိုင်ဖယ်တာကခဏပဲ။ ပြန်ထူမယ်ဆိုရင်တော့ တစ်ရက်နဲ့တော့မပြီးဘူး။ အချိန်တော့ယူရမယ်ထင်တယ်”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ဇွန် ၂၅ ရက် နေ့လယ်ပိုင်းက စမ်းချောင်းမြို့နယ်အပါအဝင် ဗ ဟန်းမြို့နယ်၊ ဆရာစံလမ်းမကြီး ပေါ်တွင် အမြင့်ပေ ၂ဝ ခန့်ရှိသော ဘောလုံးပန်းပင်လဲကျကာ ဓာတ်ကြိုးပေါ်တင်ခဲ့ပြီး ရန်ကင်းမြို့ နယ်ရှိ အောင်ဇေယျလမ်းနှင့် မိုး ကောင်းလမ်းထိပ်တွင် သစ်ပင်ပြိုကျကာ ကားတစ်စီးပေါ်ပိမိသည့် ဖြစ်စဉ်များလည်းရှိခဲ့ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံမီးသတ်တပ်ဖွဲ့က သတင်းထုတ်ပြန်ထားသည်။
(၂၁)ရာစု ပင်လုံညီလာခံအား လာမည့် ဇူလိုင် ၁၁ ရက်တွင် စတင် ကျင်းပမည်
သူလျှိုတစ်ဦးကို အဆိပ်ခတ်သည့်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ရုရှားသံတမန်များ ကို ဗြိတိန်နှင်ထုတ်
အနုပညာအနေဖြင့် ဂီတအပြင် ပန်းချီပါရေးဆွဲပြီး ပြပွဲများပြသနေသည့် နိုင်ငံကျော်အဆိုတော် ဟန်ထ
“တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ကြည့်နေကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ နားလည်နိုင်မယ့် အသိပညာမျိုးကို ပေးနိုင်ရင် ဆုရမှာြ?
TOMB RAIDER ဗီဒီယိုဂိမ်းကို ငယ်ငယ်တုန်းက ကစားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ မင်းသမီး အလိဆီယာ ဗီကန်ဒါ
ဧရာဝတီမြစ်ကူးတံတား တည်ဆောက်စဉ် လုပ်သားတစ်ဦး မြစ်အတွင်း ခြေချော်ကျပျောက်ဆုံးခဲ့ရာမှ သုံး?